Chelsea Oo Heshiis La Gaartay Ivan Perisic
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo heshiis la Gaartay Ivan Perisic
Kooxda chelsea ayaa heshiis la gaadhay xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Ivan Perisic kaas oo ay si xor ah xagaagan kula soo wareegayso sida lagu sheegay warbixin.
Laacibka reer Croatia waxa uu qandaraaskiisu dhacayaa bisha June, iyadoo qandaraaska uu hadda ku jiro aan weli lagu heshiin kooxda Serie A, wuxuu xor u yahay inuu u dhaqaaqo kooxaha dhamaadka xilli ciyaareedka.
Kooxda Thomas Tuchel ayaa u dhaqaaqday sida laga soo xigtay Sport Mediaset , iyadoo kooxda reer London ay ogolaatay heshiis ku saabsan tijaabada caafimaadka isla markaana la saxiixay qaabkii rasmiga ahaa.
Ka dib markii uu dhaliyay laba gool kulankii ay Inter 4-2 kaga badisay Juventus Coppa Italia fiidnimadii Arbacada, Perisic ayaa dhaleeceeyay kooxda markii uu la hadlayay majaladda.
“Wali waxba ma aqaano. Ciyaartoyda muhiimka ah, ma sugid ilaa daqiiqada ugu dambeysa. Waa inaad sidoo kale ogaataa taas,” 33-jirka ayaa u sheegay Sport Mediaset .
Perisic ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyay todobo gool ,waxana uu caawiye ka ahaa 6 gool caawin,isaga oo Inter ka caawiyay in ay Scudetto kula tartanto kooxda ay xafiiltamaan ee AC Milan.
Isagoo kooxda ugu soo biiray aduun dhan 17 milyan ginni sanadii 2015, Perisic ayaa waqti fiican ku soo qaatay Italy, waxaana uu qeyb ka ahaa kooxdii xilli ciyaareedkii hore qaaday horyaalka intii uu hogaaminayay Antonio Conte .